Lisi-pifidianana : Misavoritaka …!
05/11/2018 admintriatra 0
Izao vao taitra ny rehetra milahatra maka ny kara-pifidianany eny amin’ ny fokontany misy azy avy, ary azo lazaina fa be no diso fanantenana. Ny antony dia saika tsy ao anatin’ ny lisi-pifidianana, na ihany …Tohiny
Lasa fiainana andavanandron’ny olona ankehitriny ny fanafihana mitam-piadiana. Jiolahy miisa telo nitondra basy poleta sy sabatra indray no voalaza fa nanatanteraka fanafihana tao amin’ny toerana fandefasana sy fakana vola amin’ny « Orange money » tao …Tohiny
Misy ambadika politika? Tsy tanteraka ny asabotsy 3 novambra teo ny fifidianana filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Tany Sambava no fantatra fa tokony nanatanterahan’ny komity mpikarakara ny fifidianana eo anivon’ny federasiona izany. Noho izany, …Tohiny
Fanesorana ny fako eto an-drenivohitra : Hisy hetsika vaovao
Tsy vao sambany izao fa saika isaky ny fanombohan’ny vanim-potoanan’ny orana dia misavovona hatrany ny fako eto an-drenivohitra. Manoloana izay indrindra, nanamafy ny teo anivon’ny kaominina fa manadio ny tanàna no anjara andraikiny ary ny …Tohiny